Fanolorana fanampiana ny Akany Avoko eto Ambohidratrimo – Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
Fanolorana fanampiana ny Akany Avoko eto Ambohidratrimo
Tonga nanolotra fanampiana ny Akany Avoko eto Ambohidratrimo Ramatoa NAHARIMAMY Lucien Irmah, Minisitry ny Mponina, Fiahiana ara-tSosialy ary Fampivoarana ny Vehivavy. Ity Akany ity dia nandray ireo ankizy tandondomin-doza na iharan’ny herisetra teny anivon’ny fiaraha-monina.
Mianatra ara dalana, mivavaka ary mijanona eto izy ireo hatramin’ny faha 18 taonany. Miezaka hizaka-tena ny Akany manao fambolena sy fiompiana ary fitrandrahana ireo angovo ilainy andavanandro. Vokatry ny asa efa iarahan’ny Miniteran’ny Mponina sy ny SOS Village d’enfant ao anaty projet QUAPEM ary nampian’ny PAM izao fanomezana natolotra izao. Ho tohizana amin’ireo Akany 82 efa voafidy ny fanampiana. 69 eto Antananarivo, 13 any Toamasina. Mahatratra ankizy 10389 no hisitraka ireo fanampiana vary, menaka, voamaina, fitaovana fiarovana fahasalamana. Nanatrika ny fotoana Mpiara-Miasa eto amin’ny Minisiteran’ny Mponina, ny SOS Village d’enfant, ny PAM, ny Solombavambahoaka voafidy teto Ambohidratrimo, ny lehiben’ny distrika. Tsara ny manamarika fa ny Akany dia eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Mponina sy ny Minisiteran’ny Fitsarana.
Fanolorana ireo fitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana hiadiana amin’ny COVID-19 – Alaotra Mangoro	TERMES DE REFERENCE Relatifs au recrutement d’un prestataire (Cabinet d’étude) en charge de l’évaluation des micro-projets du programme ACT-P – Projet FSS
Fanisana ireo Mponina ao anatin’ny fokontany 9 nataon’ny Ministera
Fanolorana loka tamin’ny fifaninanana sary sy Tononkalo sokajy 13-17 taona
Fiaraha-miasa teo amin’ny Minisiteran’ny Mponina sy ny ONG O’SIF
TERMES DE REFERENCE Relatifs au recrutement d’un prestataire (cabinet) en charge de la collecte de données pour l’évaluation endline du programme ACT-P – Projet FSS
Fanolorana fanampi-tsakafo sy kojakoja ho an’ireo fianakaviana sahirana sahanin’ny ministera
Journée internationale pour les personnes âgées 2020